फेसबुक-ट्वीटरमा किन राति घुमेका फोटा राख्दैछन् भारतीय महिला? :: Setopati
फेसबुक-ट्वीटरमा किन राति घुमेका फोटा राख्दैछन् भारतीय महिला?
सेतोपाटी दिल्ली, साउन २५
भारतीय महिलाहरु सामाजिक संजालमा राति रमाइलो गरिरहेका फोटा पोस्ट गरिरहेका छन्।
#AintNoCinderella लेखेर उनीहरु राति घुमेका र रमाइलो गर्दै गरेका फोटा आफ्ना फेसबुक र ट्वीटरमा राखिरहेका छन्।
एकाएक सबैले यो गर्नुको कारण हरियाणा राज्यका वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता रामवीर भट्टीको टिप्पणी हो। उनले गरेको एक टिप्पणीको जवाफी प्रतिक्रिया स्वरुप महिलाहरुले रातिका फोटा पोस्ट गर्न थालेका हुन्।
चण्डिगढकी डिजे वरुणिका कुन्दुले सामाजिक संजालमा एक पोस्ट गरिन्। जसअनुसार उनी गत शुक्रबार राति काम सकेर फर्कदैं थिइन्। उनको कार केही पुरुषले पछ्याए। ती पुरुषले पछ्याउँदै झण्डै अपहरण गरे तर समयमै प्रहरीले आफ्नो फोन उठाएर उद्दार गरेकाले आफू कहीँ बलात्कृत वा मृत अवस्थामा लड्नु परेन। पछ्याउने ती पुरुषमध्ये एक भाजपाका प्रतिष्ठित नेताका छोरा थिए।
वरुणिकाको यो स्टाटस तब भाइरल भयो जब यसमा भाजपा नेता रामवीर भट्टीले टिप्पणी गरे। भारतीय समाचारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उनले यो घटनामा वरुणिकाकै दोष ठहर्याए।
उनले भने, ‘ती केटी १२ बजे राति बाहिर जानै हुँदैन थियो। उनी किन त्यति अबेरसम्म बाहिर थिइन्? जमाना राम्रो छैन। हामीले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ।’
नेता भट्टीले अभिभावकले आफ्ना छोरीछोराको ख्याल राख्नुपर्ने भन्दै राति घुम्न दिन नहुने पनि बताए। ‘छोरीछोरा समयमै घर आउनुपर्छ, अबेर रातसम्म किन बाहिर बस्ने?’ उनले भने।
उनको यो टिप्पणीपछि महिलाहरु सामाजिक संजालमा ‘म सिन्ड्रेला होइन’ भन्दै राति बाहिर भएका फोटा पोस्ट गर्न थाले।
यो अभियान कर्नाटककी अभिनेत्री तथा कंग्रेस नेता दिव्या स्पन्दना (रम्या) ले चलाएकी हुन्।
‘मध्यरातमा महिला किन बाहिर जानु हुँदैन? भट्टीजी जस्तालाई म सोध्दैछु कि हामीमाथि कर्फ्यू लगाउने उनीहरु को हुन्? हामीमाथि प्रश्न उठाउने उनी को हुन्?’ दिव्याले भनिन्।
उनले सोमबार राति ह्वाट्सएप ग्रुपमा म्यासेज पठाउँदै यो अभियान सुरु गरिन्। उनले आफ्नो फोटो ट्वीटरमा पोस्ट गर्दै अरुलाई पनि निम्तो गरिन्।
त्यसपछि सामाजिक संजालभरि यो अभियान फैलिदैं गयो र सयौं महिलाले राति बाहिर भएका फोटा पोस्ट गर्न थाले।
यस्तो फोटो राख्नेमा पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रनव मुखर्जीकी छोरी शर्मिष्था मुखर्जी पनि छन्। उनले आफ्नो फोटोमा लेखेकी छन्, ‘मध्यरात १२ बजे म बाहिर हुँदैमा, म बलात्कृत, शोषित हुनुपर्छ भन्ने होइन। मेरो स्वाभिमान मेरो अधिकार हो। २४ सै घण्टा, सातै दिन।’
पत्रकार पलक शर्माले क्यामरातिर आँखा झिम्काउँदै केही पिउँदै गरेको फोटो राखिन्। उनको यो कदम ‘बोल्ड’ भन्दै म्यासेजको ओइरो लाग्यो। ‘मलाई यो फोटोपछि निकै सराहनीय कमेन्ट आए। तर, पछिल्ला दुई दिनमा मलाई धम्की पनि आएको छ। मलाई यौनकर्मीको संज्ञा दिदैं गाली गरिरहेका छन्,’ पलकले भनिन्।
तर आफू यी धम्कीले नडराएको बताउँदै उनले भनेकी छन्, ‘हामीलाई केहीले रोक्न सक्दैन। हामी सिन्ड्रेला होइनौं। जो मध्यरातमा घर फर्कनै पर्छ।’
यो अभियानमा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दै गएको हो।
वरिष्ठ आइएएस अफिसरकी २९ वर्षीय छोरी वरुणिकाले उक्त घटनाविरुद्ध उजुरी गेरपछि प्रहरीले सिसिटिभी फुटेज संकलन गर्यो। जसले वरुणिकाको दाबी बलियो बनायो।
[caption id="" align="alignnone" width="960"] वरुणिका कुन्दु[/caption]
हरियाणाका भाजपा नेता सुवास बरालाका छोरा विकास बराला र उनका साथी आशिष कुमारले वरुणिकाको कार पछ्याएका थिए। २३ वर्षीय विकास कानुन विषयका विद्यार्थी हुन्।
[caption id="" align="alignnone" width="800"] विकास बराला[/caption]
प्रमाण भएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लियो। रक्सी खाएर मातेका जस्ता देखिएका उनीहरुको रगत र पिसाब जाँच गर्न भनिएपनि उनीहरुले मानेनन्। शनिबारको यो घटनापछि उनीहरु धरौटीमा छुटेका थिए।
बुधबार सोधपुछ गर्न बोलाएपछि उनीहरुलाई प्रहरीले यौन दुर्व्यवहार र अपहरण प्रयासको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।
घटनाबारे बोल्दै विकासका बाबु तथा नेता सुवासले वरुणिकालाई छोरी सम्बोधन गर्दै ‘हामी कानुनको सम्मान गर्छौं’ भनेका छन्। यता पार्टीले पनि छोराको गल्तीमा सुवासको कुनै दोष नरहेको भन्दै उनले दिएको राजीनामा रद्द गरेको छ।
(बिबिसि तथा समाचारमाध्यमको सहयोगमा)
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २५, २०७४, ०८:१९:१०